အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: February 2008
(၂၃) နှစ် ဆိုတဲ့ကာလကို
ပျော်စရာတွေလဲ ကြုံတွေ့ ခဲ့ပြီးပြီ
ကောင်းကင်က ကြယ်တွေထက် များလိမ့်မယ်....။
ငြိမ်းချမ်းမှုတွေ ဝေဆာနေတဲ့ မနက်ဖြန်တွေ အတွက်
အကြိမ်ပေါင်းများ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ကြည့်ခဲ့တယ်
Photo Album တစ်ခုထဲမှာ သိမ်းထားလိုက်ပါ
တစ်ခါတလေတော့လဲ အလွမ်းပြေ ထုတ်ကြည့်ပေါ့
ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်းတော့ ဖွင့်ထားစရာ မလိုပါဘူး….။
ဘ၀ကို Formula ထုတ်လို့မရတာတော့ သေချာတယ်
ရေဖြစ်ဖို့ Hydrogen နှစ်စနဲ့ Oxygen တစ်စ လိုတယ်....။
မှန်ကန်တဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု နှစ်ဆနဲ့
p.s- ဒီ Post ကို (၂၁.၂.၀၈) မှာ ရောက်ရှိမယ့် ကျွန်တော့ (၂၃) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အတွက်တင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Post ကို အမှန်တကယ်ရေးခဲ့တဲ့ နေရာနဲ့ အချိန်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ (၂) နှစ်ကျော်က ရှေ့တန်း စစ်မျက်နှာပြင် နေရာတစ်ခုမှာ ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း...။ သူငယ်ချင်းများအားလုံး ငြိမ်းချမ်း နိုင်ကြပါစေ။
Posted by Pyiet Oo Aung at 10:51 PM 13 comments:
Posted by Pyiet Oo Aung at 12:31 AM3comments:
မနေ့က ငါတို့ စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုဟာ ဒီနေ့မှာ ငါတို့ ဘ၀တွေ အဖြစ်ရှင်သန်လာခဲ့ပြီ…။ တစ်ချို့က ပြောတယ် အိပ်မက်ဆိုတာ အိပ်ယာကနိုးရင် ပျက်ဆီးသွား ကြတယ်တဲ့…။ မဟုတ်ဘူး….။ အဲဒီ့စကားကို ငါငြင်းတယ်…။ တကယ်တော့ အိပ်မက်ဆိုတာ မျှော်လင့် ချက်တစ်ခုရဲ့ ရေသောက်မြစ်ပဲ…။ အိပ်မက်ဆိုတာ ခံစားချက်တစ်ခုရဲ့ မှန်တစ်ချပ်ပဲ…။ အိပ်မက်ဆိုးတွေ အ ကြောင်းတော့မပြောပါနဲ့ ငါတို့ ညတွေ ခါးကုန်လိမ့်မယ်…။ အမှန်တော့ အိပ်မက်တွေဆိုးတာဟာ ငါတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေ ကိုယ်တိုင်က ဆိုးနေကြလို့ပါ…။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀မှာ အခက်အခဲဆုံး အချိန်ကိုပြပါဆိုရင်…။ ငါကတော့ ဖြစ်သင့်တာ နဲ့ ဖြစ်ခြင်တာ စစ်ခင်းတဲ့ အချိန်ကိုပဲ ပြရလိမ့်မယ်…။ ဦးနှောက်နဲ့ နှလုံးသား စစ်တုရင် ကစားရင် ဘယ်သူနိုင်မယ် ထင်လဲ? ငါကတော့ ဦးနှောက်ဘက်က ငါ့ဘ၀ကို ထပ်တယ်..။ အပ်ကြောင်းထပ်နေတဲ့ ဘ၀ရဲ့ အစီအစဉ် မကျနမှုတွေနဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေဟာ တကယ်တော့ စိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်သူ တွေ အတွက် အကောင်းဆုံး ဟာသတွေပါပဲ…။ တကယ်တမ်းက လူတွေရူးနေကြတာပါ…။ နှလုံးသားဆိုတာ အစကတည်းက စဉ်းစားဖို့မှ မဟုတ်ဘဲ…။ ခံစားတတ်ရင် လုံလောက်ပြီ…။ သူ့တာဝန်ကျေပြီ....။
မသေချာမှုတွေ ခြေချင်းလိမ်နေကြတဲ့ ဒီလောကကြီးထဲမှာ တစ်ခုခုကို သေချာဖို့ကြိုးစား မိတဲ့ ငါတို့ကိုယ်တိုင်ကသာ အဓိက တရားခံတွေပါ…။ မပူပါနဲ့…။ ကံကြမ္မာ တရားသူကြီးက ဘ၀ခုံရုံးမှာ ငါတို့ အတွက် အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုကို သတ်မှတ်ပေးပါလိမ့်မယ်…။ ငါတို့ဘက်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်နေဖို့ပဲ လိုအပ်တာပါ…။ ကောင်းတာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်…။ ဆိုးတာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ငါတို့ လက်တော့ခံကြရ လိမ့်မယ်…။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ငါတို့လုပ်ရပ်တွေရဲ့ အရိပ် တစ်ခုဖြစ်နေလို့ပဲ သူငယ်ချင်း.....။ ငါတို့သတ္တိ ရှိဖို့တော့လိုမယ်နော်…..။
လိုအပ်တာနဲ့ လိုချင်တာ ဆိုပြီးနှစ်မျိုးသာ ရှိတဲ့ ငါတို့ဘတွေတွေထဲမှာ ဦးစားပေးတော့ မှန်ဖို့ လိုတယ်…။ လိုချင်တာတွေနောက်ကိုချည်း လိုက်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ ငါတို့ဘ၀တွေ အတွက် တကယ်လိုအပ်တဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကနေ ပိုပြီးဝေးသွားနိုင်တယ်…။ လိုချင်တာတွေရရင် ပျော်ရွှင် ပြုံးပျော်တတ်ကြတဲ့ ငါတို့တွေ… အရာရာကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဆိုရင်လည်း အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ မျက်ရည်ကျတတ် ကြရမယ်လေ…။ ဘ၀တွေ အထပ်ထပ်ဖူးပွင့်နေတဲ့ လောကသစ်ပင်ကြီးထဲမှာ ငါတို့ဟာလဲ ဝေချိန် တန်ဝေပြီး ကြွေချိန်တန် ကြွေရမယ့် ပန်းတစ်ပွင့်ပါဘဲ…။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ငါလက်ဆောင်တစ်ခုလောက် ပေးခဲ့ချင်တယ်…။ ဒီလက်ဆောင်ဟာ ငါတို့ရဲ့ ဒီလောကမှာ အမြင့်မြတ်ဆုံး လူသားတစ်ယောက်က ပထမဆုံး စပြီးပေးခဲ့တဲ့ လက်ဆောင်ပေါ့…။ အချိန်တွေ ဘယ်လိုဘဲ ပြောင်းပြောင်း…။ နေရာတွေ ဘယ်လိုပဲ ပြောင်းပြောင်း…။ အမြဲတန်း တန်ဖိုးရှိ ပြီး ထာဝရလှပနေ..တန်ဖိုးရှိနေမယ့် လက်ဆောင်တစ်ခုပေါ့…။ ဖြစ်နိုင်ရင် တခြားသူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ဒီလက်ဆောင်လေးကို အလျင်းသင့်ရင် သင့်သလို ပေးလိုက်ပါ…။ သူတို့အတွက်လည်း အဖိုးတန်ပါလိမ့်မယ်...။
ငါပေးမယ့်လက်ဆောင်က တစ်ခြားမဟုတ်ပါဘူး…။ စကားလုံးလေး တစ်လုံးပါဘဲ…။ ဥာဏ်ရှိသလို အသုံးတည့်ရင် တည့်သလို သုံးလို့ရပါတယ်…။ ဒီလောကကြီးကနေ ငါတို့ အပြီးအပိုင် မထွက်ခွာသ၍ပေါ့….။
“ ယောနိသော မနသိကာရ”…… သင့်တင့် လျောက်ပတ်စွာ နှလုံးသွင်းနိုင်ပါစေ။
p.s- This Post Is A Birthday Present For Lu Lu & Acutally Dedicated To All The Friends In This Outlook Who Take Care Of Each Others...
Posted by Pyiet Oo Aung at 4:23 AM 15 comments:
Words Start With "L" For Me...
p.s- Wish You All, To Be A Meaningful "Valentine's Day"
Posted by Pyiet Oo Aung at 12:17 AM 1 comment:
မှတ်ချက်။ ။ ဒီဝတ်ရုံအား စတင်ယက်လုပ်ခဲ့သော သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ မွေးနေ့အား ဒီ Post ဖြင့် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
တောင်းပန်ခြင်း။ ။ ကျွန်တော်ဒီပို့စ်ကို ဒီနေ့အမှီတင်ဖို့ ကြိုပြီးရေးထားခဲ့တာပါ...ဒါပေမယ့် Connection ကျနေတာကြောင့် အခုမှတင်ဖြစ်ကြောင်း တောင်းပန်အပ်ပါတယ်...ဒီပို့စ်ကို ကျွန်တော့်ကိုယ်စားတင်ပေးကျတဲ့ Blogger ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေကိုလည်း အလွန်ပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဒီနေရာမှာပဲ မှတ်တမ်းတင်လိုက် ပါတယ်..။ ။
Posted by Pyiet Oo Aung at 11:11 PM 17 comments:
p.s- ကျွန်တော် ဒီရက်ပိုင်း Connection ကျနေသောကြောင့် ဒီကဗျာလေးကို ပြည်ထောင်စုနေ့ အမှီ (ကျွန်တော့အချိန်အရ) အမှတ်တရ အနေဖြင့် အခုမှ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...။
Posted by Pyiet Oo Aung at 2:39 AM No comments:
ကျွန်တော်နှင့် မိန်းမလို...........မိန်းမရ စိတ်ဓာတ်
မိန်းမလို မိန်းမရ ဆိုတဲ့စကားဟာ ဘယ်အချိန်ကတည်းက ဘယ်လိုပေါ်ပေါက်လာမှန်းမသိတဲ့ စကား တစ်ခုပါ… အခုချိန်ထိတော့ (ကျွန်တော်ပဲ ဥာဏ်မမှီလို့လားတော့မသိ) ဘာအဓိပ္ပါယ်မှန်းကို မသိသေး ပါဘူး… များသောအားဖြင့်တော့ ဒီစကားက ယောက်ျားးတစ်ယောက်ကို နစ်နစ်နာနာ ဖြစ်အောင်ပြောတဲ့ အခါ မှာ သုံးလေ့သုံးထ ရှိတာများပါတယ် (ဆိုလိုတာကတော့ အဲဒီယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ မိန်းမစိတ် ရှိတယ်လို့ ပြောချင်တာနဲ့ တူပါတယ်)… ကျွန်တော်ကတော့ အဲလိုသုံးတာကို သိပ်သဘာဝ မကျသ လို… တရားမျှတမှုမရှိဖူးလို့လဲထင်ပါတယ်…. ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိန်းမစိတ်ရှိ တယ်( မိန်းမလို မိန်းမရစိတ်) လို့ပြောလိုက်ယုံနဲ့ပဲ… စဉ်းစားကြည့်ရင် မိန်းမတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်အားလုံးကပဲ ယုတ်ညံ့နေ သလိုလိုကြီး ဖြစ်နေပါတယ်… ဒီလိုကြီးတော့ မဟုတ်သေးဖူးထင်ပါတယ်…
ယောကျာ်းစိတ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမစိတ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကောင်းတာရှိနိုင်သလို… မကောင်းတာလဲရှိနိုင်တာပါပဲ။
ဒီလိုပြောကျကြေးသာဆို ကျွန်တော်ကလည်း အကျင့်မကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ဒီလို ပြောချင်ပါတယ် “ကြည့်စမ်း မိန်းကလေးတန်မဲ့ ယောက်ျားလို ယောက်ျားရ စိတ်ကြီးနဲ့”ကဲကျွန်တော် အဲလိုမျိုး ပြောကြည့်လိုက်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ? ကျွန်တော်သာအဲလို ပြောလိုက်လို့ ကတော့ သူက သူ့ကို ယောက်ျားစိတ်ရှိတယ်လို့ ပြောတယ်ထင်ပြီး ပိုတောင်ဝမ်းသာ သွားဦးမလားပဲ။ ဒါဆိုရင် တော့ ဒီ “မိန်းမလို မိန်းမရစိတ်” ဆိုတဲ့ စကားကြီးဟာ တစ်ခုခုတော့မှားနေပြီဆိုတာသေချာပါတယ်…။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အဲဒီ့စကားရဲ့ အဓိပါယ်ကို မကြာသော ကာလကမှ ကောင်းကောင်းကြီး သဘော ပေါက်လိုက်ပါတယ်…။…အဲဒီလိုကျတော့လဲ ဒီစကားလေးက တော်တော်လေးကို အနှစ်သာရရှိသွားပါ တယ်…။
ကျွန်တော်တကယ်ပဲ အဲဒီစကားလုံးနဲ့ သင့်တော်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ကြုံတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းကတော့ မိန်းမအရမ်းလိုချင်နေတဲ့ ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် မနေ့က မိန်းမရသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း မိဘများထံ ဖုန်းဆက်ရင်းသိလိုက်ရလို့ပါပဲ….။ ကဲ…ဘယ်သူဘာပြောချင် လဲ??? သူလိုလူကိုမှ “မိန်းမလို…မိန်းမရ” လူလို့မပြောရင် ဘယ်သူ့ကိုပြောမလဲ...??? ကျွန်တော်အဲဒီ သတင်းကို ကြားတဲ့ အချိန်မှာ ၀မ်းသာလွန်းလို့ အောက်ပါအတိုင်းတောင် ယောင်ပြီးတော့ အော်လိုက် မိပါသေးကြောင်း…..
ဒါမှ…ငါ့ရဲ့ “မိန်းမလို…မိန်းမရ” သူငယ်ချင်းကွ………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
p.s- ကျွန်တော့်ငယ်သူငယ်ချင်း(ပြောမနာ..ဆိုမနာ…!သူ့ရှိကိုစား…ကိုယ့်ရှိဖွက်ထား) ရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသာပတေးနေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာဆောင်အတွက် အဝေးရောက်လက်ဖွဲ့ တစ်ခုအနေနဲ့ ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေး တစ်ချို့ကို ဖြည့်စွက်ပြီး ဒီ Post လေးကို အမှတ်တရ ရေးဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်….။ ယောကျာ်းလေးများအားလုံး “မိန်းမလို…မိန်းမရ” ဖြစ်နိုင်ကျပါစေ….!!!!!!!!!
Posted by Pyiet Oo Aung at 4:38 AM3comments:
မနက်ဖြန်များစွာသို့.... ( Photo Edition)
NOTE : CLICK THE PICTURE TO ENLARGE THE PHOTO.
Posted by Pyiet Oo Aung at 10:01 PM3comments:
အဲဒီ့မှာ တည်ခင်းထားတဲ့ စားစရာတွေရှိတယ်
ပျံ့လွင့်နေတဲ့ သီချင်းသံတွေ ရှိတယ်
ကျွန်တော့်ချစ်သူ ‘မွေးနေ့ရှင်’ ရှိတယ်….။
ချစ်သူရဲ့ နှုတ်ခမ်း တစ်ချက်အလှုပ်မှာ
သူ့ဘ၀နဲ့ ထပ်တူကျ အရေအတွက်ရှိတဲ့
မီးတောက်လေးတွေ ချစ်သူရဲ့ သောကတွေနဲ့အတူ
မိုင် ထောင်နဲ့ချီပြီး ဝေးတယ်လေ…။
အိပ်မက်တွေကို တန်ဖိုးထားတဲ့ ကျွန်တော်နဲ့
အိပ်မက်တွေထဲက နိုးထသွားတဲ့ “သူ…”
ကျွန်တော့်ချစ်သူရဲ့ နံနက်ခင်းတွေ လှပနေမယ်ဆိုတာ
ကျွန်တော် ဘ၀တစ်ခုလုံးစာ ယုံကြည်ပါတယ်….။
ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဝေဒနာတွေကို သေသေချာချာ ထုပ်ပိုးပြီး
ဒီ “ည” ထဲမှာ မြုပ်လိုက်ပါ
“ပန်းရောင်” အနာဂတ်တွေ ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်….။
ကျွန်တော့်ချစ်သူရဲ့ ဖြစ်တည်ခြင်း ဂုဏ်ပြုပွဲအတွက်
ကျွန်တော်သူ့ကို “တံတား” တစ်ခု
ပြီးတော့သူ့ကို ကျွန်တော်သေသေချာချာ ပြောလိုက်သေးတယ်
“တံတား ဆိုတာ အလှကြည့်ဖို့ မဟုတ်ဘူး နင်းသွားဖို့ပါ” လို့……။ ။
P.S - Dedicated To My Someone Special’s Birthday
Posted by Pyiet Oo Aung at 9:04 PM 1 comment:
ဒီလိုမျိုး ဖြစ်မယ်မှန်းသာ သိရင်
ချစ်သူကို ကျောခိုင်းခဲ့တဲ့ ရလဒ်က
၁၉ ရာစု အိပ်ယာဝင် ပုံပြင်တွေနဲ့
၂၁ ရာစုကိုချော့သိပ်ဖို့ ကြိုးစားတာကတော့
ခေါင်းငုံထားတိုင်း ကြောက်တယ်လို့ မထင်ပါနဲ့
အဖြေမှန်ကို သိလာရမှာပါ...။ ။
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:26 AM3comments:
အရှိုးရာ အထပ်ထပ် ထင်သွားတယ်
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:08 PM7comments:
ငါ့ကို အဆိပ်လာလာ မခတ်နဲ့...။
ငါ့နားတွေကို မုဒိန်း လာလာမကျင့်နဲ့....။
ငါ့အတ္တကို ငါကိုယ်တိုင် ခုံရုံးတင်
သေဒဏ်ချ ကြိုးမိန့် ပေးပြီတာတောင် မကျေနပ်သေးရင်
ငါ့ဝိဥာဉ်ကိုပါ တစ်သက်လုံး ချုပ်ထားလိုက်...။
အဆုံးသာ စီရင်လိုက်တော့....။ ကြားလား..?
မှတ်ချက်။ ။ စကားလုံးများ ကြမ်းတမ်းသည်ဟု ထင်ပါက သည်းခံပေးကြပါရန်။
Posted by Pyiet Oo Aung at 8:09 PM 1 comment:
တစ်ရက်စာ ဘ၀တစ်ခုကို သစ်ဖို့
ငါ့ကိုငါ မှန်ထဲတောင် မကြည့်ရဲတော့ဘူး။
" မင်းစွဲလိုက်တဲ့ ငါကကောက်ရိုးတစ်မျှင်
ဗုံးတစ်လုံးရဲ့ စနက်ကြိုး.." တဲ့
ကဗျာက ဆုံးနေပြီ....။ ။
Posted by Pyiet Oo Aung at 4:15 PM6comments:
ကျွန်တော်နှင့် မိန်းမလို...........မိန်းမရ စိတ်ဓာတ...